Gmail ရဲ့ Feature အသစ်ဖြစ်တဲ့ Confidential Mode ကို လူတိုင်းအသုံးပြုနိုင်ပြီ
11 May 2018 . 3:57 PM
Gmail တစ်ခုကို အရေးကြီးကြောင်းသိစေချင်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ် ပို့ပြီးအချိန်တစ်ခုမှာ ပျက်သွားစေချင်ရင်တော့ Confidential Mode ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Google က Confidential Mode ကို မကြာသေးခင်က Gmail Design အသစ်နဲ့အတူ မ်ိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
Confidential Mode ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်တော့ Gmail ကို Browser ကနေဝင်သုံးမှရမှာပါ။ Borwser မှာ Gmail ကိုဝင်ပြီး ညာဖက် အပေါ်ဖက်မှာရှိတဲ့ စက်သွားပုံလေးကို နှိပ်ပြီး Try the New Gmail ဆိုတာကို အရင်နှိပ်ပြီး Gmail Design အသစ်ကိုပြောင်းရမှာပါ။ Design အသစ်ပြောင်းပြီးသွားရင်တော့ ပုံမှန် Mail ပို့တဲ့အတိုင်းပဲ Compose ကိုနှိပ်ပြီး အောက်ဖက်က Menu ထဲမှာပါတဲ့ သော့ခလောက်ပုံလေးကို နှိပ်ပြီး Confidential Mode ကိုဝင်လို့ရပါပြီ။ Confindential Mode မှာတော့ သင်ပို့မယ့် Mail ကို တစ်ဖက်ကလူက လက်ခံရရှိပြီးတာနဲ့ အချိန်တစ်ခုကြာရင် အလိုအလျောက်ပျက်သွားအောင် Expire Date သတ်မှတ်ပေးလို့ရပါတယ်။
Confidential Mode Button
နောက်ထပ်လုံခြုံရေး Feature တစ်ခုကတော့ Mail ကိုဖွင့်ဖတ်ဖို့အတွက် Password ထည့်ပေးလို့ရတာပါ။ Mail ကိုလက်ခံရရှိသူရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကို ထည့်ပေးပြီး Password ခံပေးလိုက်လို့ရပါတယ်။ တစ်ဖက်လူရဲ့ ဖုန်းထဲကို Google က Password ပို့ပေးမှာဖြစ်တာကြောင့် ပိုပြီးလုံခြုံမှုရှိလာပါတယ်။ စိတ်မကောင်းစရာကတော့ လောလောဆယ်မှာ Password Feature က မြန်မာပြည်က ဖုန်းတွေအတွက် အလုပ်မလုပ်သေးပါဘူး။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ အသုံးပြုလို့ရလာမယ်လို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။
Confidential Mode ကို လက်ရှိအချိန်မှာ ဖုန်းတွေပေါ်က Gmail App တွေနဲ့တော့ အသုံးပြုလို့မရသေးပါဘူး။ Web မှာပဲ အသုံးပြုလို့ရပါသေးတယ်။ Google အနေနဲ့တော့ ရုံးလုပ်ငန်းတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး Confidential Mode ကိုလုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပေမယ့် လိုအပ်တဲ့နေရာမှာ လိုအပ်သလို အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။
Gmail ရဲ့ Feature အသဈဖွဈတဲ့ Confidential Mode ကို လူတိုငျးအသုံးပွုနိုငျပွီ
Gmail တဈခုကို အရေးကွီးကွောငျးသိစခေငျြတယျ၊ ဒါမှမဟုတျ ပို့ပွီးအခြိနျတဈခုမှာ ပကျြသှားစခေငျြရငျတော့ Confidential Mode ကို အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။ Google က Confidential Mode ကို မကွာသေးခငျက Gmail Design အသဈနဲ့အတူ မိတျဆကျပေးခဲ့ပါတယျ။
Confidential Mode ကိုအသုံးပွုဖို့အတှကျတော့ Gmail ကို Browser ကနဝေငျသုံးမှရမှာပါ။ Borwser မှာ Gmail ကိုဝငျပွီး ညာဖကျ အပျေါဖကျမှာရှိတဲ့ စကျသှားပုံလေးကို နှိပျပွီး Try the New Gmail ဆိုတာကို အရငျနှိပျပွီး Gmail Design အသဈကိုပွောငျးရမှာပါ။ Design အသဈပွောငျးပွီးသှားရငျတော့ ပုံမှနျ Mail ပို့တဲ့အတိုငျးပဲ Compose ကိုနှိပျပွီး အောကျဖကျက Menu ထဲမှာပါတဲ့ သော့ခလောကျပုံလေးကို နှိပျပွီး Confidential Mode ကိုဝငျလို့ရပါပွီ။ Confindential Mode မှာတော့ သငျပို့မယျ့ Mail ကို တဈဖကျကလူက လကျခံရရှိပွီးတာနဲ့ အခြိနျတဈခုကွာရငျ အလိုအလြောကျပကျြသှားအောငျ Expire Date သတျမှတျပေးလို့ရပါတယျ။
နောကျထပျလုံခွုံရေး Feature တဈခုကတော့ Mail ကိုဖှငျ့ဖတျဖို့အတှကျ Password ထညျ့ပေးလို့ရတာပါ။ Mail ကိုလကျခံရရှိသူရဲ့ဖုနျးနံပါတျကို ထညျ့ပေးပွီး Password ခံပေးလိုကျလို့ရပါတယျ။ တဈဖကျလူရဲ့ ဖုနျးထဲကို Google က Password ပို့ပေးမှာဖွဈတာကွောငျ့ ပိုပွီးလုံခွုံမှုရှိလာပါတယျ။ စိတျမကောငျးစရာကတော့ လောလောဆယျမှာ Password Feature က မွနျမာပွညျက ဖုနျးတှအေတှကျ အလုပျမလုပျသေးပါဘူး။ နောကျပိုငျးမှာတော့ အသုံးပွုလို့ရလာမယျလို့ ခနျ့မှနျးရပါတယျ။
Confidential Mode ကို လကျရှိအခြိနျမှာ ဖုနျးတှပေျေါက Gmail App တှနေဲ့တော့ အသုံးပွုလို့မရသေးပါဘူး။ Web မှာပဲ အသုံးပွုလို့ရပါသေးတယျ။ Google အနနေဲ့တော့ ရုံးလုပျငနျးတှအေတှကျ ရညျရှယျပွီး Confidential Mode ကိုလုပျပေးထားတာဖွဈပမေယျ့ လိုအပျတဲ့နရောမှာ လိုအပျသလို အသုံးပွုလို့ရပါတယျ။
by 2B . 42 mins ago